အဆိုပါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ကားအိပ်မက်ဖြစ်နေဆဲ - Uber - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ • TECH & Telecom "ဒီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ကားအိပ်မက်ဖြစ်နေဆဲ - Uber
အဆိုပါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ကားအိပ်မက်ဖြစ်နေဆဲ - Uber
Visda 16 ခုနှစ်ဧပြီလ 2019
ကမ္ဘာတဝှမ်းမြို့ကြီးများ၏လမ်းမများပေါ်တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကားများ ... အဆိုပါအလားအလာကိုရဲ့အိပ်မက်။ သို့သော်က Uber Technologies ကဦးစီးဌာနကသိမ်းသွားရမပြုလုပ်သင့်။
ကုမ္ပဏီ VTC သုတေသနအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေမယ်သုတေသီများ၎င်း၏သင်းနေဆဲလူ့အော်ပရေတာအပေါ်မှီခိုအားထားရပါလိမ့်မယ်ဟုဆိုသည်။
"အချို့သောစိန်ခေါ်မှုများရှိနေပါသည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကားလမ်းပေါ်တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကားများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လည်းမြို့ကြီးတွေမှာပါလိမ့်မယ်။ နှင့်အခက်အခဲများကျနော်တို့ကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မြို့ကြီးများ၌နေသောအတွက်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သငျသညျစီစဉ်ကြဘူးအရာများစွာကိုလုပ်နေတာကလူအများကြီးရှိပါတယ်။ "Raquel Urtasun သည် Uber အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ Group ၏အကြီးအကဲသိပ္ပံပညာရှင် (SaysATG).
ကုမ္ပဏီ၏ယခုနှစ်မကုန်မီစောင်ရေအတွက်၎င်း၏ပထမဆုံးမော်ဒယ်များထားရန်ကတိပေးထားအဖြစ် Uber သုတေသနအဖွဲ့များစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အထင်ကြီးလာပြီ။ လေ့လာသုံးသပ်သူများကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်များမှအကူးအပြောင်း၏အောင်မြင်မှုကိုဖို့ကုမ္ပဏီအတွက်အရေးပါကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား VTC။ ဒါဟာသူ့ရဲ့စမ်းသပ်ချဲ့ထွင်ရန်တိုရွန်တို, ကနေဒါအတွက်ဒေါ်လာသန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
"ငါသည်ကုမ္ပဏီ၏ကြေညာချက်များရှိလိမ့်မည်ထင်ပေမယ့်ကျွန်တော်ကြေညာဖို့ဘာမျှမရှိသည်။ ကျနော်တို့အဆင်သင့်ခံစားရပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကအခြားမြို့များသို့သွားပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုငါတို့အဘို့အကအလွန်အရေးကြီးပါတယ် ... ဖိအားအောက်တွင်အဆောတလျင်မနှင့်ကျွန်တော်ဖိအားအောက်မှာရှိကြ၏။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ရေတပ်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြသောကြောင့်, လူတိုင်းကတော့ Uber ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းဆိုပါတယ်, ဤကိစ္စတွင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအော့ဖ်လိုင်းနှင့်အတူအမှုအရာတွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ "
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကားများထဲကတစ်ခုပါသေးရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်မတ်လ 2018 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးလူသွားလူဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် Uber ကသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုတည်းဖြတ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီ၏ယာဉ်မောင်းလမ်းများမပါဘဲ၎င်း၏ကားများနုတ်ထွက်နှင့်အရီဇိုးနား၎င်း၏ဗဟို entammer စမ်းသပ်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ဤစမ်းသပ်မှုများဒီဇင်ဘာလ၌ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။
"ဒါဟာဖြစ်ပျက်ကအရမ်းဝမ်းနည်းနှင့်အလွန်ကံဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ တဖန်ကြှနျုပျတို့သညျဤတိကျတဲ့မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. မသာ ... ကျနော်တို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဆန်းစစ်။ အဆိုပါအယူအဆကိုကျနော်တို့ဘေးကင်းအမြင့်မားဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့တာဝန်ခံဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်တကယ်တော့အတွက်ဧရိယာထဲမှာရည်ညွှန်းလုံခြုံရေးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ "
ဤအ cons-ရိုက်ချက်များနေသော်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအုပ်စုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်များအပေါ်သုတေသနယူနစ် Uber သို့ဒေါ်လာဘီလျံထားရန်ဆန္ဒရှိသည်။
SOURCE မှ: https://fr.africanews.com/2019/04/12/la-voiture-autonome-reste-un-reve-uber/
Cool Pixel3ပေးဖို့နဲ့ Pixel 3a ၏အံ့ဆဲဆဲပစ်လွှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်: Google က '' နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ Avengers '' ကိုအသုံးပြုသည်
Weego, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြောင်းလဲမှ app တစ်ခု